LibreOffice Math keessatti, sadallaan addaan b'anii ni mula'atu kanaafu addaan fageenyi isaan gidduu salphaanumatti ni hiikama?
Tokkoon tokkoon sadallaa "bitaa" fi "mirga" fayyadamuun qindeessu ni dandeessa, garuu addaan fageenyi sadallaa gidduu jiru dhabbata hin ta'u sababni isaa yaada waligalaatti wali galu waan ta'ef. Kanaan ala, karaan sadallaan addaan fageenyi isaan gidduu dhabbata ta'e itti agarsiifamu jira. Kana fiixan baasuf, Sadallaa baratamoo fuuldura "\_" (haxaarroo) qubachiisi. Sadallaan kun amma akkuma mallattoolekami kabirooti akkasumaas hiriirri isaani akkuma mallattoo kabirooti
bita lbrace x mirga none
hamamta *2 langle x rangle
hamamta *2 \_langle x \_angle
Title is: Sadallaa Saaga Jira